Ireo roa vaovao afak’omaly nalefa eny Befelatanana sy Anosiala, dia teto Antananarivo avokoa, ary io fa mbola miampy io hatrany. Eto Antananarivo rahateo no ahitana olona voa be indrindra, ary mety ho anton’io ny tsy fanajana fihibohana. Efa nisy ny tranga mampanahy hoe tsy fantatra izay namindra tamin’ny olona efa fantatra fa voa, izay midika fa misy ny olona voa mandehandeha mety hamindra amina olona marobe. Nisy 6 vaovao sitrana ihany koa, ka niakatra ho 29 ny isan’izy ireo, ary 81 kosa ny mbola tazonina eny amin’ny hopitaly. Ao anatin’ny fiarahamonina, ary efa miparitaka ireo tranga vokatry ny fifampikasohana, hoy io mpitsabo io, izay nanamafy hatrany ny tokony hanajana ny fepetra. Rehefa sitrana tanteraka ny olona, izay mandalo fitiliana PCR in-droa mielanelana roa andro, tsy nisy trangan’aretina tao anatin’ny telo andro nisesy, dia mbola misy fepetra maro arahina mba hisorohana ny ahiahin’ny fiarahamonina. Mila vonona ara-tsaina. Mila jerena akaiky hoe afaka manaraka fepetra ve ny any an-tranony. Tsy maintsy manao aro-tava, fiarovana ny fitaovana ampiasainy, tsy maintsy misy fanazavana maromaro amin’ny fepetra tsy maintsy arahiny rehefa any an-trano: mitokana, ny mahakasika ny entany sy ny fitaovany,… Tsy maintsy manao taratasy izay antoka fa azony ny fepetra ary harahany antsakany sy andavany. Rehefa feno ireo izay vao homena ny “certificat”. Raha tsy izay dia mbola manampy azy hatrany ny mpitsabo. Rehefa feno ireo dia tsy tokony hanana ahiahy ny fiarahamonina.